Psalmen 120 HTB - Nnwom 120 ASCB
1Mesu frɛ Awurade wɔ mʼahohiahia mu,
na ɔgye me so.
2Ao Awurade, gye me firi atorɔ ano
3Ɛdeɛn na ɔbɛyɛ wo,
na ɛdeɛn na ɛka ho bio, Ao nnaadaa tɛkrɛma?
4Ɔde asraafoɔ bɛmma a ano yɛ nnam
ne gyasramma bɛtwe wʼaso.
5Nnome nka me sɛ mabɛsoɛ Mesek,
na mete Kedar ntomadan mu!
6Matena ase akyɛre dodo
wɔ wɔn a wɔkyiri asomdwoeɛ mu.
7Meyɛ asomdwoeɛ onipa;
nanso sɛ mekasa a, ɛyɛ ɔko ma wɔn.
ASCB : Nnwom 120